လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန – Technological University (Myeik)
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ရန်နှင့် ဒေသအကျိုးပြု သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။
(၁) သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာ ပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်း အား အင်ဂျင်နီယာများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသော သင်ကြား၊ သင်ယူမှုစနစ်ဖြင့် ထိရောက်သော စာတွေ့၊ လက်တွေ့များသင်ကြားပြသပေးရန်။
(၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် စာသင်နှစ်အလိုက် Project များ၊ Internship Training များနှင့် Graduation Thesis များ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ပိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာ စေရန်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အထူးပြု ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းဆုံး (၇၅ %) ရှိရန်နှင့် အနည်းဆုံးပြုန်းတီးနှုန်း (Drop Out) သည် (၈%) အောက်လျော့နည်းစေရန်။
Ph.D (EP) ၀၉၂၅၀၂၀၅၂၅၅ nyeinyinsoe@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၇၉၆၈၀၀၈၃၈ gyulaingtun@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၇၉၈၃၈၀၅၉၈ khineieikhine@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၉၇၂၃၁၂၃၀၀ moemoesan@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၄၄၄၅၅၄၄၄၆ hninhninwai@tumyeik.edu.mm
၆ ဒေါ်ချောစုစန် ကထိက
ME (EP) ၀၉၄၂၅၀၀၄၁၉၃ chawsusan@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၇၉၃၈၈၅၀၀၃ khaingnwehtoo@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၄၂၁၁၄၆၂၃၇ mohmohlwin@tumyeik.edu.mm
BE (EP) ၀၉၇၈၈၄၆၁၉၃၁ minyu@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၄၂၂၂၀၃၈၀၆ phyomyatzin@tumyeik.edu.mm
ME (EP) ၀၉၄၅၀၉၉၃၂၆၁ thelphyuphyo@tumyeik.edu.mm
BE (EP) ၀၉၄၂၂၁၉၁၃၆၁ ayemarlar@tumyeik.edu.mm
BE (EP) ၀၉၂၅၀၆၁၆၅၅၆ phyoeitun@tumyeik.edu.mm
(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ်၊ သင်တန်းနှစ်အလိုက် ပြုလုပ်သော လက်တွေ့ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုများ
1 EP- 11011 Principle of
1 Resistance Measurement by Meter , Color and Number Coded
2 Series Connected Resistances
3 Parallel Connected Resistances
5 Characteristics of Series-parallel Circuit
6 Kirchoff’s Voltage Law (KVL)
7 Kirchoff’s Current Law (KCL)
2 EP- 21011 Electrical
1 Verification of KVL and KCL using hardware and digital simulation.
2 Verification of mesh analysis using hardware and digital simulation.
3 Verification of nodal analysis using hardware and digital simulation.
4 Verification of super position theorem using hardware and digital simulation.
3 EP- 21014 Basic Electronics I 1 Half-wave rectifier
2 Full-wave rectifier
4 EP- 21021 Electromechanics I 1 Electromagnetic Induction
2 Electromagnetic Devices
5 EP- 21013
(Civil) Applied Electrical
6 EP- 31011 Electrical
Circuit Analysis III
1 Capacitor charge Time Constant
7 EP- 31014 Power
Electronics I 1 DC Chopper
8 EP- 31021 Electrical Machine
and Operation I 1 Torque-speed characteristics of DC machine
9 EP- 31025 Electrical Measurement Instrumentation 1 Wheatstone Bridge
10 EP- 41028 Programmable
Logic Control I 1 Overview on Programmable Logic Controller
2 Three-phase Asynchronous Motor Sequence Control Circuit
11 EP- 51014 Electrical Machine and Control I 1 Torque-speed characteristics ofTorque-speed characteristics of
12 EP- 61033 Computer Aided
2 Power flow solution by MATLAB
3 Optimal dispatch of Generation by MATLAB
4 Balanced fault calculation by MATLAB
5 Unbalanced fault calculation by MATLAB
6 Stability solution by MATLAB
Total views : 80126